Nhau - Injiniya yakakura-mikuru inosanganisa chirimwa chine hungwaru budiriro nyowani nzira yekusanganisa chirimwa fekitori yakananga kutengesa
Isu tinobatsira nyika ichikura kubvira 2015
Nharembozha Kongiri Batching Plant
Chakamira Kongiri Batching Chirimwa
SICOMA Kongiri Musanganiswa
BHS Kongiri Musanganiswa
SICOMA Sapre Zvikamu
BHS Spare Zvikamu
Cement Screw Kutakura
Screw Conveyor Spare Zvikamu
Cement Silo Spare Zvikamu
Belt Conveyor Spare Zvikamu
Batching Kudyara Yekuwedzera
Batching chisanganiso System
Batching chisanganiso Spare Zvikamu
Unyanzvi hukuru-hukuru kusanganisa chirimwa chinonzwisisika girini budiriro nyowani nzira yekusanganisa chirimwa fekitori yakananga kutengesa
Unyanzvi hukuru-hukuru kusanganisa chirimwa chinonzwisisika girini budiriro nyowani kusanganisa chirimwa fekitori yakananga kutengesa
Iwo madhairekisheni matsva ehungwaru uye girini kukura kweinjiniya yakakura-pamwero kusanganisa chirimwa michina. Tatarisana neshanduko dzinokurumidza mumamiriro azvino, mainjiniya makuru-ekuvhenganisa chirimwa ari kutarisanawo nekuenderana shanduko. Mazuva ano, nekumhanyisa kwekuvaka kwemadhorobha nekumaruwa, kudiwa kwemishini yekongiri kwakawedzerawo. Nekudaro, pane zvisingagumi kongiri michina pamusika, uye mhando yavo yakatonyanya kusaenzana. Pakati pezvigadzirwa izvi, patova nezvimwe zvigadzirwa zvine imwe nhanho yekushandisa, yakanyanya kurema kurongeka, yakanaka yekusanganisa chiteshi mhando, uye yakaderera mari. Asi panguva imwecheteyo, kune zvekare vamwe vagadziri vanokwezva vatengi nemitengo yakaderera, uye iwo ma technical parameter emidziyo akagara padanho rechinyakare.
Kutanga, maererano nemidziyo chaiyo. Iko kunyatso kweakakura-emhando yekusanganisa michina yemidziyo inowanzo kuratidzwa mumativi mana ehuwandu, samende, kusanganisa uye mvura. Kune zviyero, iko kurongeka kunowanzo kudzorwa panenge 2%, samende iri pamusoro pe1%, zvinongedzo zvinowanzoita 1%, uye iko kunyatso kuri pamusoro pe1%. Kune zviyero, kuyera hoppers uye zviyero zvebhanhire zvinowanzo shandiswa kuyera. Zviyero zveBelt zvinowanzo kuwanda kuyerwa, uye kuyera hoppers kwakakamurwa kuve kuwedzera uye munhu kuyerwa. Iko kuyerwa kwesimendi uye mamwe mapoda zvakare akapatsanurwa kuita nzira mbiri: wega uye zvinowedzera huremu. Additives yakakamurwa kuita nhatu nzira dzekuyera: volumetric, mass, uye pulse zvinoenderana zvakasiyana zvinowedzerwa. Yemvura, iyo zvakare yakakamurwa kuita 2 metering nzira, kureva volumetric uye kuyera. Kuve nechokwadi chekurongeka kwezvinhu zvakagadzirwa ndiyo kiyi yekugadzira yemhando yepamusoro yekutengesa kongiri. Kana iko kurongeka kwemidziyo kukavandudzwa, michina yacho pasina mubvunzo ichave yakatonyanya kusimba.
Chechipiri, pamiti mikuru inosanganisa, chikuru chinangwa kugadzira mhando yepamusoro yekutengesa kongiri. Naizvozvo, kusarudzwa kwemidziyo mbishi kwakanyanya kukosha. Iine izvo zvinowedzera kusimba zvinodiwa kune zvakasvibirira michina, kusarudzwa kwemidziyo mbishi zvigadzirwa kwakakanganiswa zvakare. Kusvika pakuwedzera zvinowedzerwa, maindasitiri akasimba marara akasara senge nhunzi dota, slag, slag yemvura, uye calcium carbide slag inofanira kushandiswa kutsiva kushandiswa kwekugadziriswa kwetsika yakakosha yakakora upfu zvigayo. Chechipiri, maererano neakaunganidzwa, maindasitiri ane hukama anogona zvakare kushandiswa kushandisa zviwanikwa zvizere uye kuzadzisa chinangwa chekuchengetedza zviwanikwa.
Uyezve, kudzora kwemidziyo yemidziyo mikuru inosanganisa inofanirwa kuvandudzwa kuti uwane huchenjeri hwakazara uye nokudaro isunungure vanhu. Nekuvandudzwa kwenguva, zvizere otomatiki zvishandiso hazvidzivisike. Kana iwe uchida kuchengeta nzvimbo mune yekongiri michini indasitiri, humunhu uye kungwara kweanodzora system kwakakosha.
Post nguva: Oct-28-2020
Iyo kambani inonyanya kubata mune kongiri batching chirimwa michina uye zvimwe zvikamu zvemasevhisi masevhisi, kusanganisira simende silo, simenti sikuruu conveyor, kongiri chisanganiso, bhandi conveyor uye yehuwandu kusanganisa system, kupa imwechete-yekumira sevhisi yevatengi.
Musiyano wedziviriro yezvakatipoteredza ...
Engineering pamwero mukuru vaiitawo chirimwa inte ...
Chii chinonzi Mobile Concrete Plant?
Global kongiri batching chirimwa musika pat ...
CONCRETE BATCHING PLANT MARKET KUTI Uwedzere ...
Chikunguru 16, 2017
Aggregate Batching Dosing Sisitimu, Aggregate Batching System, Automaticaggregate Batching Fertilizer Chisanganiso, Concrete chisanganiso Spare Zvikamu, Otomatiki Aggregate Batching Machine, Otomatiki Aggregate Batching System,